Talen'ny ivon-toeram-pizahantany manerantany momba ny fizahantany any Afrika Atsinanana vaovao
Home » Vaovao momba ny famatsiam-bola fizahan-tany » Talen'ny ivon-toeram-pizahantany manerantany momba ny fizahantany any Afrika Atsinanana vaovao
Novambra 4, 2020
Tale vao notendrena ho an'ny ivon-toerana momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany sy ny krizy globalista Kenyana, Dr. Esther Munyiri. Dr. Munyiri dia hiara-hiasa akaiky amin'ireo fizarana misy ifandraisany amin'ny Oniversiten'i Kenyatta, ny GTRCMC any Jamaika, ary ireo ivon-toerana zanabolana hafa.
Mahafantatra ny filàna mitantana ny krizy eo amin'ny sehatry ny fizahantany any amin'ny faritra Afrika Atsinanana, ny Ivontoerana zanabolana momba ny fizahan-tany sy fitantanana krizy (GTRCMSC) dia naorina tamin'ny volana novambra 2019 tao amin'ny Kenyatta University, Kenya, taorian'ny fifanarahana roa tonta teo amin'ny filohan'ny HE Uhuru Kenyatta sy ny praiminisitra Andrew Holness avy any Jamaika.
Ny Center Global Resilience and Crisis Management Center dia nanendry ny manam-pahaizana momba ny fitantanana fizahan-tany, Dr. Esther Munyiri, ho talen'ny birao Global Turismo Resilience sy Crisis Management Center Atsinanana Atsinanana ao amin'ny Kenyatta University any Kenya.
Miresaka momba ny fanendrena, Filoha mpiara-miasa ary mpanorina ny GTRCMC, Hon. Edmund Bartlett Hoy izy: “Dr. Munyiri dia nitondra traikefa an-taonany maro momba ny fahalemen'ny fiovan'ny toetr'andro, fanalefahana ary fampifanarahana, fitantanana ny krizy amin'ny fizahan-tany sy ny fanadihadiana Geospatial. Ireo toetra ireo dia hanampy betsaka amin'ny fikarohana sy ny valiny ao amin'ny faritra ary hanampy amin'ny fanamafisana ny fizahan-tany fizahan-tany. ”
Amin'ny maha Tale vao notendrena azy dia hiara-hiasa akaiky amin'ireo fizarana mifandraika amin'ny oniversiten'i Kenyatta, ny GTRCMC any Jamaika, ary ireo ivon-toerana zanabolana hafa izy; ny Minisiteran'ny fizahantany any Kenya sy ny faritra; sampandraharaham-panjakana sy fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana mifandraika amin'izany ary ireo mpandray anjara amin'ny sehatry ny fizahantany.
“Ity fanendrena ity dia manan-danja indrindra indrindra amin'ny fotoana izay ihaonan'izao tontolo izao ny vokatry ny areti-mandringana manerantany. Ny fahaizan'i Dr. Munyiri dia hanampy amin'ny valiny tena izy rehefa mandrindra ny fiaraha-miasa ilaina amin'izany faritra izany, ”hoy ny Profesora Lloyd Waller, talen'ny Executive GTRCMC. Araka ny filazan'ny Profesora Waller, ny biraon'i Afrika Atsinanana dia hampivelatra, hampihatra, hisolo vava, hanara-maso ary hanangana fahaiza-manao mifandraika amin'ny faharetan'ny aretina amin'ny fizahan-tany amin'ny fizahan-tany, ny fiaretana amin'ny fivelomana fizahan-tany, ny fiaretana amin'ny fiarovana ny fizahantany ary koa ny fandraisana andraikitra momba ny fahaizan'ny fizahantany any Afrika Atsinanana. Ny biraon'ny GTRCMC Afrika Atsinanana dia hiara-hiasa amin'ny biraon'ny Karaiba ihany koa amin'ny fitantanana ny diary akademika sy ara-barotra. Ny biraon'ny roa tonta dia mamarana ny famoahana ny International Journal of Tourism Resilience and Crisis Management amin'ny martsa 2021 "ary koa manampy ny biraon'ny Malta amin'ny tetikasa fanofanana sy fananganana fahaiza-manao any Afrika sy Mediteraneana.
Dr. Munyiri dia nanao fikarohana lalina momba ny faritra mifandraika amin'ny Crisis Management amin'ny fizahan-tany. Vita soa aman-tsara ny diany PhD momba ny fahalemena sy ny fampifanarahana ny sehatry ny fizahan-tany amin'ny fiovan'ny toetr'andro any Kenya. Izy koa no mpikaroka loha laharana tamin'ny tetikasa fikarohana notarihin'ny Komity Mpitantana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany any ambanin'ny minisiteran'ny fizahan-tany sy ny fiainana dia, Kenya, izay mpiara-miombon'antoka avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina ary akademia.